Meydka wiil dhalinyaro ah oo lagu arkay deegaanka Ceelasha Biyaha ee duuleedka Muqdisho – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Meydka wiil dhalinyaro ah oo lagu arkay deegaanka Ceelasha Biyaha ee duuleedka Muqdisho
Wararka naga soo gaaraya deegaanka Ceelasha Biyaha ee duuleedka magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in saakay aroortii halkaasi lagu arkay meydka wiil dhalinyaro ah oo u muuqday in habeenkii xalay halkaasi lagu dilay.
Meydka wiilkaasi ayaa sida la sheegay la dhigay meel aan sidaasi uga fogeyn saldhiga ciidamada booliska Soomaaliya ee ku yaalla deegaanka Ceelasha Biyaha, waxaana jirkiisa ka muuqday rasaastii xalay lagu dilay.
Qaar ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta Bulshoweyn ayaa u sheegay in markii ay saakay aroortii hurdada kasoo kaceen ay arkeen meydkaasi oo yaalla meel u dhaw saldhiga ciidamada booliska Soomaaliya.
Illaa iyo haatan lama oga cidda rasmiga ah ee ka dambeysay dilka wiilkaasi dhalinyarada ahaa, waxaana markii dambe meydka halkaasi ka qaaday haweeney sheegtay inuu iyada la dhashay.
Dhinaca kale, dadka deegaanka ayaa dilka wiilkaasi dhalinyarada ah cabsi ka muujiyay, waxaana goobta lasoo dhigay meydka markii dambe soo gaaray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya oo howlgalo baaritaano ah halkaasi ka sameeyay.